Face Mask ကိုမကျြနှာပျေါမှာ ကွာကွာထားတာက ကောငျးလား? မကောငျးဘူးလား? - Lifestyle Myanmar
Home Health & Beauty Face Mask ကိုမကျြနှာပျေါမှာ ကွာကွာထားတာက ကောငျးလား? မကောငျးဘူးလား?
Face Mask ကိုမကျြနှာပျေါမှာ ကွာကွာထားတာက ကောငျးလား? မကောငျးဘူးလား?
Face mask တွေဟာ နာရီဝက်မကြာဘဲ ကျွန်မတို့ရဲ့အသားအရေကို ပိုကောင်းစေတဲ့ ဈေးသိပ်မကြီးသော facials အသေးစား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့တွေဟာ Face Mask လိမ်းပြီး လုံးဝခြောက်သွားတဲ့အထိ စောင့်တာ သို့မဟုတ် မျက်နှာပေါ်မှာ face mask လိမ်းပြီး အိပ်တာက အကျိုးအာနိသင် အများကြီးရမယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါက လုံးဝမှားနေပါတယ်။ ကျွန်မတို့အသားအရေကို ကောင်းတာထက် ပိုပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် face mask ကို အချိန်အရမ်းကြာကြာ ထားတာက ကောင်းလား? face mask (မျက်နှာပေါင်းတင်ဆေး) ကို ဘယ်အချိန်အကန့်အသတ်ထိ ထားသင့်သလဲ? ဆိုတာကို ပျိုမေတို့ သိစေဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
face mask (မျက်နှာပေါင်းတင်ဆေး) တွေဟာ ရွှံ့ကနေ Gel Mask, Homemade Mask(DIY), Sheet Mask, Peel Off Mask စသဖြင့် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် face Mask တွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်များကလည်း အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ hydrating mask များက အစိုဓါတ်ပေးပြီး တချို့ mask များမှာ ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး exfoliate လုပ်ပေးတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အချိန်အကန့်အသတ်က အကုန်လုံး မတူပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် mask အမျိုးအစားတစ်ခုစီအတွက် အချိန်အကန့်အသတ်ကို ပျိုမေတို့သိရှိစေဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
`၁။ Clay Masks (ရွှံ့ပေါင်းတင်ဆေး)
Clay Masks များက သင့်အသားအရေကို သန့်ရှင်း၊ စင်ကြယ်စေပါတယ်။ ၎င်း၏ အညစ်အကြေးကို စုပ်ယူနိုင်စွမ်းတွေကြောင့် clay mask ကိုမျက်နှာပေါ်မှာ ဘယ်တော့မှ အရမ်းကြာကြာ မထားသင့်ပါဘူး။ clay mask ရဲ့အဆင့် သုံးဆင့်ရှိပါတယ်။ ပထမအဆင့်က အပြင်ကနေ အကျိုးပြု သတ္တုဓါတ်တွေကို သင့်အသားအရေက စုပ်ယူတဲ့ စိုစွတ်မှု အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးနောက် mask ရဲ့ အေးမြမှုနှင့် ထိတွေ့မှုကြောင့် သွေးစီးဆင်းမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးပြီး သင့်ရဲ့ဆံချည်မျှင်သွေးကြောလေးများကို exercises လုပ်ပေးတဲ့ ခြောက်သွေ့မှုအဆင့် စတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်အသားအရေမျက်နှာပြင်ကနေ အစိုဓါတ်တွေကို စုပ်ယူတဲ့ ခြောက်သွေ့မှုအဆင့်ပြီးနောက် ကြာလာတဲ့အခါ ယားယံခြင်းနှင့် ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နောက်တစ်ချိန် ရွှံပေါင်းတင်ဆေးသုံးတဲ့အခါ အလွှာလိုက်ကွာကျတဲ့အထိ စောင့်ပြီး မျက်နှာမသစ်ပါနဲ့။ အနည်းဆုံး ၃မိနစ်လောက်ပဲ အခြောက်ခံပါ။ မိနစ် ၂၀ထက် ပိုမကြာသင့်ပါဘူး။
၂။ ဓါတု exfoliantတွေ မပါတဲ့ Cream/gel masks
ဒီပေါင်းတင် mask တွေမှာ ဆိုးရွားတဲ့ မည်သည့်ပါဝင်ပစ္စည်းမှ မရှိပါဘူး။ သူတို့ဟာ အသားအရေကို အစိုဓါတ်ကောင်းကောင်း ရရှိစေယုံသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီ mask ကို သင်ကြိုက်တဲ့အချိန်ထိထားနိုင်ပါတယ်။ တချို့ ခရမ်နဲ့ ဂျယ် mask တွေက တစ်ညလုံးတောင် ထားနိုင်ပြီး မျက်နှာပြန်သစ်စရာ မလိုပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီ mask တွေက အသုံးပြုတာက ဘေးကင်းပြီး သင်ကြာကြာထားရင် ရလဒ်က ပိုကောင်းပါတယ်။
၃။ exfoliating အက်ဆစ်များ, အင်ဇိုင်းဓါတ်များ, or retinoids
exfoliating ingredients, enzymes or retinoids ပါဝင်တဲ့ face mask များက မျက်နှာပေါ်မှာ တင်းတင်းလေးဖြစ်သွားတဲ့အထိ ထားပေးရင် ကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရရှိပါတယ်။ Exfoliating Mask ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ exfoliating ဆိုတဲ့ အတိုင်း exfoliating နဲ့ cleansing လုပ်ပေးနိုင်တာပါပဲ။ သူ့ကိုတော့ အသားညစ်ညမ်းနေတဲ့ သူတွေ ဆားဝက်ခြံ အမဲစက် ရှိတဲ့ သူတွေ သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ အချိန်အကန့်အသတ်အနေနဲ့ ၁၀ မိနစ်အတွင်း သို့မဟုတ် ယားယံခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ တင်းကျပ်ခြင်း ခံစားရလျှင် ဖယ်ရှားပေးတာ ပြုလုပ်ပေးပါ။ ဒါက သင့်ရဲ့သဘာဝအသားအရေ အတားအဆီးကို ထိခိုက်မှုဖြစ်လာစေတဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၄။ Sheet Masks
Sheet Masks ကိုအချိန်ကြာကြာထားခြင်းက တကယ်တော့ သင့်အသားအရေထဲက အစိုဓါတ်ကို ပြန်ပြီးစုပ်ယူနိုင်တဲ့ ပြောင်းပြန်သက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အသားအရေကနေ သတ္တုဓါတ်များနဲ့ ဗီတာမင်များ ဆွဲယူနိုင်တာကြောင့် sheet ကိုခြောက်သွေ့တဲ့အထိ ဘယ်တော့မှ မစောင့်ပါနဲ့။ မိနစ် ၂၀ အချိန်ကန့်သတ်ပြီး မိနစ် ၃၀ထက်ပိုပြီး မထားသင့်ပါဘူး။ over essence ထားချင်ရင်တော့ သင့်လည်ပင်း၊ လက်များနှင့် ခြေထောက်တွေပေါ်မှာ လိမ်းနိုင်ပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးက sheet masks နှင့်ဘယ်တော့မှ မအိပ်သင့်ပါဘူး။ skin care အနေနဲ့ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် ကနေ နှစ်ကြိမ်ထိ သုံးနိုင်ပါတယ်။
၅။ Peel Off Mask
Peel Off Mask တွေက အသားအရေရဲ့ အပေါ်ယံအလွှာကို ခွာပစ်တာကြောင့် နည်းနည်းထိခိုက်မှု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ချွေးပေါက်ပြဿနာများ ဖြစ်စေတာကြောင့် အသားအရေပုံမှန်အမျိုးအစား ရှိသူတွေသာ သုံးသင့်ပြီး အဆီပြန်တဲ့သူ၊ အသားခြောက်တဲ့သူတွေ မသုံးသင့်ပါဘူး။
face mask သုံးတဲ့အခါ သင့်အသားအရေကို မထိခိုက်စေဖို့ သတိရပါ။ ဒါ့ကြောင့် အချိန်ပြည့်ရင် mask ကို ဖယ်ရှားပြီး ချက်ချင်း မျက်နှာသစ်ပေးပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ မိနစ် ၂၀ထက်ပိုပြီး mask ကို မထားပါနဲ့။
Face mask တှဟော နာရီဝကျမကွာဘဲ ကြှနျမတို့ရဲ့အသားအရကေို ပိုကောငျးစတေဲ့ ဈေးသိပျမကွီးသော facials အသေးစား ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျမတို့တှဟော Face Mask လိမျးပွီး လုံးဝခွောကျသှားတဲ့အထိ စောငျ့တာ သို့မဟုတျ မကျြနှာပျေါမှာ face mask လိမျးပွီး အိပျတာက အကြိုးအာနိသငျ အမြားကွီးရမယျလို့ ယုံကွညျကွပါတယျ။ ဒါက လုံးဝမှားနပေါတယျ။ ကြှနျမတို့အသားအရကေို ကောငျးတာထကျ ပိုပွီး အန်တရာယျဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ face mask ကို အခြိနျအရမျးကွာကွာ ထားတာက ကောငျးလား? face mask (မကျြနှာပေါငျးတငျဆေး) ကို ဘယျအခြိနျအကနျ့အသတျထိ ထားသငျ့သလဲ? ဆိုတာကို ပြိုမတေို့ သိစဖေို့ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
face mask (မကျြနှာပေါငျးတငျဆေး) တှဟော ရှံ့ကနေ Gel Mask, Homemade Mask(DIY), Sheet Mask, Peel Off Mask စသဖွငျ့ ပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့လာပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ face Mask တှရေဲ့ ရညျရှယျခကျြမြားကလညျး အမြိုးမြိုးရှိပါတယျ။ hydrating mask မြားက အစိုဓါတျပေးပွီး တခြို့ mask မြားမှာ ဆဲလျသတှေကေို ဖယျရှားပေးပွီး exfoliate လုပျပေးတဲ့ ပါဝငျပစ်စညျးမြား ပါဝငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အခြိနျအကနျ့အသတျက အကုနျလုံး မတူပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ mask အမြိုးအစားတဈခုစီအတှကျ အခြိနျအကနျ့အသတျကို ပြိုမတေို့သိရှိစဖေို့ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
`၁။ Clay Masks (ရှံ့ပေါငျးတငျဆေး)
Clay Masks မြားက သငျ့အသားအရကေို သနျ့ရှငျး၊ စငျကွယျစပေါတယျ။ ၎င်းငျး၏ အညဈအကွေးကို စုပျယူနိုငျစှမျးတှကွေောငျ့ clay mask ကိုမကျြနှာပျေါမှာ ဘယျတော့မှ အရမျးကွာကွာ မထားသငျ့ပါဘူး။ clay mask ရဲ့အဆငျ့ သုံးဆငျ့ရှိပါတယျ။ ပထမအဆငျ့က အပွငျကနေ အကြိုးပွု သတ်တုဓါတျတှကေို သငျ့အသားအရကေ စုပျယူတဲ့ စိုစှတျမှု အဆငျ့ဖွဈပါတယျ။ ပွီးနောကျ mask ရဲ့ အေးမွမှုနှငျ့ ထိတှမှေု့ကွောငျ့ သှေးစီးဆငျးမှုကို လှုံ့ဆျောပေးပွီး သငျ့ရဲ့ဆံခညျြမြှငျသှေးကွောလေးမြားကို exercises လုပျပေးတဲ့ ခွောကျသှမှေု့အဆငျ့ စတငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့အသားအရမေကျြနှာပွငျကနေ အစိုဓါတျတှကေို စုပျယူတဲ့ ခွောကျသှမှေု့အဆငျ့ပွီးနောကျ ကွာလာတဲ့အခါ ယားယံခွငျးနှငျ့ ရဓေါတျခနျးခွောကျခွငျး ဖွဈပျေါပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ နောကျတဈခြိနျ ရှံပေါငျးတငျဆေးသုံးတဲ့အခါ အလှာလိုကျကှာကတြဲ့အထိ စောငျ့ပွီး မကျြနှာမသဈပါနဲ့။ အနညျးဆုံး ၃မိနဈလောကျပဲ အခွောကျခံပါ။ မိနဈ ၂၀ထကျ ပိုမကွာသငျ့ပါဘူး။
၂။ ဓါတု exfoliantတှေ မပါတဲ့ Cream/gel masks
ဒီပေါငျးတငျ mask တှမှော ဆိုးရှားတဲ့ မညျသညျ့ပါဝငျပစ်စညျးမှ မရှိပါဘူး။ သူတို့ဟာ အသားအရကေို အစိုဓါတျကောငျးကောငျး ရရှိစယေုံသာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဒီ mask ကို သငျကွိုကျတဲ့အခြိနျထိထားနိုငျပါတယျ။ တခြို့ ခရမျနဲ့ ဂယျြ mask တှကေ တဈညလုံးတောငျ ထားနိုငျပွီး မကျြနှာပွနျသဈစရာ မလိုပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ ဒီ mask တှကေ အသုံးပွုတာက ဘေးကငျးပွီး သငျကွာကွာထားရငျ ရလဒျက ပိုကောငျးပါတယျ။
၃။ exfoliating အကျဆဈမြား, အငျဇိုငျးဓါတျမြား, or retinoids
exfoliating ingredients, enzymes or retinoids ပါဝငျတဲ့ face mask မြားက မကျြနှာပျေါမှာ တငျးတငျးလေးဖွဈသှားတဲ့အထိ ထားပေးရငျ ကောငျးတဲ့အကြိုးသကျရောကျမှုတှေ ရရှိပါတယျ။ Exfoliating Mask ရဲ့ အဓိက ရညျရှယျခကျြကတော့ exfoliating ဆိုတဲ့ အတိုငျး exfoliating နဲ့ cleansing လုပျပေးနိုငျတာပါပဲ။ သူ့ကိုတော့ အသားညဈညမျးနတေဲ့ သူတှေ ဆားဝကျခွံ အမဲစကျ ရှိတဲ့ သူတှေ သုံးပေးသငျ့ပါတယျ။ အခြိနျအကနျ့အသတျအနနေဲ့ ၁၀ မိနဈအတှငျး သို့မဟုတျ ယားယံခွငျး၊ ခွောကျသှခွေ့ငျး၊ တငျးကပျြခွငျး ခံစားရလြှငျ ဖယျရှားပေးတာ ပွုလုပျပေးပါ။ ဒါက သငျ့ရဲ့သဘာဝအသားအရေ အတားအဆီးကို ထိခိုကျမှုဖွဈလာစတေဲ့ လက်ခဏာ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။
Sheet Masks ကိုအခြိနျကွာကွာထားခွငျးက တကယျတော့ သငျ့အသားအရထေဲက အစိုဓါတျကို ပွနျပွီးစုပျယူနိုငျတဲ့ ပွောငျးပွနျသကျရောကျမှု ရှိပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့အသားအရကေနေ သတ်တုဓါတျမြားနဲ့ ဗီတာမငျမြား ဆှဲယူနိုငျတာကွောငျ့ sheet ကိုခွောကျသှတေဲ့အထိ ဘယျတော့မှ မစောငျ့ပါနဲ့။ မိနဈ ၂၀ အခြိနျကနျ့သတျပွီး မိနဈ ၃၀ထကျပိုပွီး မထားသငျ့ပါဘူး။ over essence ထားခငျြရငျတော့ သငျ့လညျပငျး၊ လကျမြားနှငျ့ ခွထေောကျတှပေျေါမှာ လိမျးနိုငျပါတယျ။ အရေးအကွီးဆုံးက sheet masks နှငျ့ဘယျတော့မှ မအိပျသငျ့ပါဘူး။ skin care အနနေဲ့ သုံးမယျဆိုရငျတော့ တဈပတျ တဈကွိမျ ကနေ နှဈကွိမျထိ သုံးနိုငျပါတယျ။
Peel Off Mask တှကေ အသားအရရေဲ့ အပျေါယံအလှာကို ခှာပဈတာကွောငျ့ နညျးနညျးထိခိုကျမှု ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ခြှေးပေါကျပွဿနာမြား ဖွဈစတောကွောငျ့ အသားအရပေုံမှနျအမြိုးအစား ရှိသူတှသော သုံးသငျ့ပွီး အဆီပွနျတဲ့သူ၊ အသားခွောကျတဲ့သူတှေ မသုံးသငျ့ပါဘူး။
face mask သုံးတဲ့အခါ သငျ့အသားအရကေို မထိခိုကျစဖေို့ သတိရပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ အခြိနျပွညျ့ရငျ mask ကို ဖယျရှားပွီး ခကျြခငျြး မကျြနှာသဈပေးပါ။ အကောငျးဆုံးကတော့ မိနဈ ၂၀ထကျပိုပွီး mask ကို မထားပါနဲ့။
Previous articleဝက်ခြံတွေကင်းစင်စေပြီး မှန်ကန်တဲ့ မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်နည်းကိုအသုံးပြုတတ်ဖို့အကြံပေးချက်အချို့
Next articleအပြင်သွားတဲ့အခါ ဝတ်ဆင်လို့ရမယ့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ စတိုင်ကျတဲ့ ဖက်ရှင်လေးတွေ